Rifabutin (ရွိုင်ဖာဗျူတင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Rifabutin (ရွိုင်ဖာဗျူတင်)
Rifabutin (ရွိုင်ဖာဗျူတင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Rifabutin (ရွိုင်ဖာဗျူတင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Rifabutin သည် တစ်ချို့ဆေးများအား ခန္ဓါကိုယ်မှ ဖယ်ထုတ်သည့်အမြန်နှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပြီး ထိုဆေးများ၏အာနိသင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဆေးများမှာ – aprepitant/fosaprepitant, lurasidone, phenytoin, ranolazine, suvorexant, tacrolimus, tasimelteon, “ blood thinners” (such as warfarin), calcium channel blockers (such as diltiazem, verapamil), စီပိုးအားကုသရာတွင် သုံးသည့် ဆေးပေါင်းစပ်များ (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) စသည်။